FAQs - QuANZHOU HOPE SHOE Co, Ltd.
Semuenzaniso, nguva yekutungamira inenge mazuva manomwe. Kwekugadzirwa kwakawanda, nguva yekutungamira ndeye mazuva makumi maviri nematatu mushure mekugamuchira mubhadharo wekubhadhara. Nguva dzekutungamira dzinova dzinoshanda kana tagamuchira dhizari yako, uye isu tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana nguva dzekutungamira dzisingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugovera zvaunoda. Muzviitiko zvakawanda tinokwanisa kuzviita.
Iwe unogona kuita kubhadhara kune yedu bank account, Western Union, PayPal, TT kana LC